के सिकाइन्छ र के सिक्छन् हँ नेपालका कम्युनिष्टहरु? – Dcnepal
के सिकाइन्छ र के सिक्छन् हँ नेपालका कम्युनिष्टहरु?
प्रकाशित : २०७८ पुष १६ गते १०:३५
“कुनैदिन तपाईंले नै हाम्रा महान क्रातिकारी नेता माधवकुमार नेपाल भनेर बोलेको सुन्नु र लेखेको पढ्नु नपरोस है!” कुनै एक प्रसंगमा एमालेका एकजना मित्रलाई मैले भनेको थिए। उनी सक्रिय राजनीतिमै भएकाले उनको नाम उल्लेख गर्न चाहिनँ मैंले।
कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई के सिकाइन्छ कुन्नि? नजिक छँदा महान क्रान्तिकारी नेता हुने अनि अलिक टाढा हुनासाथ गद्दार, बिदेशी दलाल, अवसरवादी, क्रान्ति बिरोधी, पलायनवादी इत्यादि के के भैहाल्ने।
उबेला बामदेवले पार्टी फोडेपछि एमालेको बिद्यार्थी संगठनले टुँडिखेलमै कार्यक्रम गरेर बामदेवलाई देशको सबभन्दा ठूलो भ्रष्टचारी घोषणा गरेको थियो तर पछि पार्टी एकता भएपछि उनै बामदेव एमाले पार्टीका महान नेता हुन पुगे।
त्यस्तैगरि हिजो प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षको रुपमा ओलीको समान हैसियतमा पार्टीमा भित्र्याउँदा प्रचण्डका कुनै पनि अपराध देखिएनन् तर अहिले एमालेको लागी उनै प्रचण्ड सबभन्दा भ्रष्ट र अपराधी देखिन थालेका छन्।
जव कुनै दिन फेरि प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पार्टी एकता हुन पुग्यो भने यिनै एमालेजनहरुले प्रचण्ड र नेपाललाई हाम्रा महान क्रान्तिकारी नेता भन्ने नै छन्। किनकि उबेलाका पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझीदेखि पुष्पलालसम्मलाई पनि गद्दार भनेर घोषणा गरेका उदाहरणहरु इतिहासमा प्रशस्त पढ्न पाइन्छ।
तर अहिले पनि रामबहादुर थापा “बादल” लगायतका एमालेमै रहेका केही पूर्वमाओवादीहरु चाहिँ एमालेका उच्चकोटीका नेता त छँदै छन्। जीवनभर एमालेको लागि काम गरेको र मदन भण्डारीको अकल्पनीय मृत्युपश्चातको एउटा जटिल ट्रान्जिसनमा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपालभन्दा जीवनभर एमालेलाई सिध्याउन हतियारसमेत उठाएका र एमालेमा कुनै योगदान नगरेका राम बहादुर थापाहरु अहिले सम्मानित नेता छन्।
यति निकृष्ट पाठ सिकाउन नहुने हो आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई। त्यसै किसिमको स्कुलिङ्ले गर्दा होला शायद नेताले जे बोल्यो त्यसको विचारै नगरी कार्यकर्ताले अन्धभक्त भै ताली पड्काउनुको कारण। यसले भोलिको देश हाक्ने नेतृत्व कस्तो आउने भन्ने कुरालाई चित्रण गर्दछ।
एउटा पार्टीको गलत स्कुलिङको प्रभाव सम्पूर्ण देशलाई पर्दछ। त्यसैले पार्टीहरुले आफ्ना क्याडरहरुलाई सिकाउने पाठले भोलिको देशको प्रतिनिधित्वलाई निर्देशित गर्दछ। त्यसैले देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावित युवाहरुलाई “मुतको न्यानो“ को शैलीमा सिकाइने शिक्षाले देशलाई निकै ठुलो क्षति पुग्न सक्दछ।